Vista's Colorful Planet: The Real one....
သူဘယ်သူလည်းဆိုတော့ ပိုး ဆိုတဲ့မိန်းမပျိုလေးပေါ့နော်...
သူက ကျနော့်စီဘောက်ထည်းက အောက်မှာပြထားတဲ့ အရုပ်ကလေးကိုအင်မတန်ကြောက်ပါသတဲ့
အဲဒီအရုပ်လေးနဲ့ ချွတ်စွပ်နီးပါးတူလို့အပြင်မှာမနည်းရိုက်လာရတဲ့ပုံပါ ..
ကျနော်တို့ နာမည်ပေးထားတာ “ကောင်ကောင်ကြီး “တဲ့။
အခုပုံကတော့ အစစ် “ကောင်ကောင်ကြီး “ ပေါ့။
ပိုး ဆိုတာဘယ်သူလို့ သိရင်လည်းသိမှာပေါ့လေ...
မသိတဲလူများကတော့ ကောမန့် တွေမှာလာဆဲတဲ့သူလေးလို့ ပဲမှတ်ကြကုန်. ....
kwi kwi :}
ဟိ မိုက်စ် #$%&^%R*^%&*IU&I^&*( ပိုးအစားနာ့ဆဲတွားဒယ်း))))
You are so kind! did you feed it? I think soft green leave is their food, not so sure. Need to consult with google :)
နာမည်က ပိုး ဖြစ်ပြီး ပိုးကောင်ကြတော့ကြောက်တယ်လို့ ထင်သွားမှာပေါ့ ဗစ်စုတ်ရဲ့ 
ဟင် မရှိတဲ့ သိက္ခာကိုထပ်ချတယ် ဘယ်ကွန်မန့် မှာသွားဆဲလို့ လဲ အရူးမဗစ်ရဲ့ 
အံ့သြလို့ မဆုံးဘူး ဒီလောက်အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ အကောင်ပုံကို ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ နည်း၂လေးမှ အသည်းမယားဘူးလားမသိဘူး
နောက်ဆို စီဘောက်ပဲဖွင့်မယ် ဘလော့ကို သပိတ်မှောက်တယ်
Ko Boyz Says:
အိမ်တန်းရှည်တစ်ခုမှာ မုဆိုးမ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်အိမ်က လှမ်းထားတဲ့ ထမီစုတ်တစ်ထည် ပျောက်သွားသတဲ့။
အဲဒီမှာ အဒေါ်ကြီးက ဟယ် ငါ့လှမ်းထားတဲ့ ထမီ ပျောက်သွားပါလားလို့ ရေရွတ်တာကို... လူတိုင်းက ကြားလိုက်သတဲ့။
အဲဒီမှာ အမျိုးသား တစ်ယောက်က ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ကျုပ် လုံချည်အဆင်ကို သဘောကျလုိ့ ခဏယူဝတ်တာ ဘယ်မှာ ခိုးလို့လဲဆိုပြီး ပြန်အော်သတဲ့။
AWS SNS to Lambda Cross Account Setup
ကြက်သားအမွ အကြွတ်ကြော် - သားကြီးလဲ စင်္ကာပူကို ပြန်ကာနီးပါပြီ သမီးငယ်လေးလဲ တောဘက်ဆေးရုံ ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ သူတို့အတွက် ကြက်သားအမွကြော်လေးတွေ အမဲသား အမွကြော်လေးတွေ ဘ...